Mmegide Cyber ​​nke Ofesi na Southwest Airlines? FAA kwụsịrị ụgbọ elu WN niile na United States | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Mmegide Cyber ​​nke Ofesi na Southwest Airlines? FAA kwụsịrị ụgbọ elu WN niile na United States
Mmegide Cyber ​​nke Ofesi na Southwest Airlines? FAA kwụsịrị ụgbọ elu WN niile na United States
Kedu ihe nro na-adọkpụ na ụgbọ elu Southwest Airlines?
FAA nyere iwu ka ọdụ ụgbọ elu Southwest kwụsị ụgbọ elu ya niile na US. Airlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ na-ekwu na ihe kpatara ya bụ mpụ kọmputa. Ihe kpatara ya: A gwaghị ya!
Ọ Southwest Airlines wakporo site na kọmputa hacker, mba ọzọ, ma ọ bụ nje? Enwere ntule na otutu nnabata.
Flightsgbọ elu Southwest Airlines n'ime US akwụsịtụ nwa oge.
FAA nyere nwa oge mba kwụsị na arịrịọ nke Southwest Airlines mgbe ụlọ ọrụ kpebiri a ndoputa kọmputa nke. Biko kpọtụrụ ụgbọ elu Iji nwetakwuo nkọwa.
Otu onye njem ụgbọ elu Southwest ụgbọ elu kwuru, sị: “Ọ ga-amasị m ichetara onye ọ bụla, ka m nọ ọdụ n'ọdụ ụgbọ elu St Louis na-eche ịbanye, na ihe omume taa @SouthwestAir abụghị mmejọ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na tebụl na ụgbọ elu taa. Ha na-eme ihe niile ha nwere ike. Ekula ha mkpu. ”
The ụgbọ elu tweeted: "Anyị maara nke usoro mbipụta na-arụ ọrụ ngwa ngwa idozi," na ụgbọ elu tweeted. "Anyị ga-ekekọrịta karịa ozi n'oge na-adịghị anya."
Otu onye njem a nwere nkụda mmụọ kwuru, sị: Ndị ọrụ Southwest gwara m n'ọnụ ụzọ, "Njikwa ụgbọelu na-akagbu ụgbọ elu, ọ bụghị Southwest, n'ihi nke a anyị enweghị ike ịkwụ gị ụgwọ. ” A D was m ụgha. Ekwesiri m imefu ego m na họtelu ma na-ebugharị site na ọdụ ụgbọ elu. Agbachitere ha!
Linegbọ elu ahụ kwukwara, sị: Anyị nọ na usoro nke ịmaliteghachi ọrụ nkịtị mgbe usoro nke usoro a n'ehihie a mepụtara nsogbu ụgbọ elu na netwọkụ anyị. Anyị maara na ọtụtụ ndị ahịa ka na-achọ enyemaka ma na-arụ ọrụ iji dozie nsogbu ndị ahụ ngwa ngwa o kwere mee.
Ruo ugbua ụgbọ elu 478 kagburu wee kwụsị 528 na Southwest Airlines
Ihe kpatara kọmputa ji agbada na-abụ ihe omimi. O nweghi ozi achọtara na weebụsaịtị Southwest Airlines.
Na soshal midia na ndị nọ n’ime okwu a nwere ike ị metụtara ịwakpo cyber-ma ọ bụ ihe mgbapụta ransomware.
Iji mee ka onye ọ bụla dajụọ Southwest Airlines dị nnọọ tweet:
Izu ụka a, anyị ga-atụgharị 50. Ọ bụ ya mere anyị ji enye gị 50% azụ na ụbọchị iri ise nke njem na ọdịda. Ihe ị ga - eme bụ akwụkwọ ụbọchị Tọzdee, jiri koodu mgbasa ozi SAVE50. Ee, nke a bụ eziokwu. Ee, nke a bụ The Epic.
Southwest Airlines Co., nke a na-akpọ Southwest, bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ndị isi na United States na ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọnụ ala n'ụwa. Ọ dị n'isi ụlọ ọrụ na Dallas, Texas, ma nwee ndokwa maka ọrụ 115 na United States na mba iri ọzọ.